နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းမှု ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရန် ကျင့်စဉ်အသေးစိတ်
> အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းမှု ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရန် ကျင့်စဉ်အသေးစိတ်
ဒီနေရာလေးမှာ အစ္စလာမ် သာသနာတော်ရဲ့ ဒုတိယ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ နမာဇ် နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မဆ်အာလာများ၊ ရကအသ် လွတ်ရင် ပြန်ဖြည့်နည်းများ၊ စဂ်ျဒါ စအူ ထိုက်ရင် ဘယ်လို ပြုလုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို အနေ အထားမျိုးမှာ စဂ်ျဒါ စအူ ထိုက်တယ် . . . . . ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ နမာဇ် မက္ကရူဟ်ဖြစ်တယ်/ နမာဇ် ပျက် တယ်၊ အစ ရှိသဖြင့် နမာဇ် နှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံ သဘောတရားများကို မွတ်ဆလင်မ် ညီအစ်ကို မောင်နှများများ အားလုံး သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီ ဖိုရမ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီဖိုရမ်လေးကို အားလုံးပဲ ပါဝင်ကူညီပေးကြပါ၊ နောက်ပြီး မသိတဲ့ အချက်အလက်များကိုလဲ မေးမြန်းကြပါ။ ကျနော်တို့ လဲ တတ်နိုင်သလောက် အထောက်အထား အပြည့် အစုံနဲ့ ဖြေပေးပါ့မယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ဒီအစီအစဉ်လေးကို အလ္လာဟ့် လက်ခံတော်မူပါစေ (အာမိန်း)
Reply by elan.electric on December 12, 2009 at 12:52pm
ကျွန်ုပ်မဖြေတက်သောအဖြေများဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်အကူအညီတောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါသည်။ ၁)အစ္စလာမ်သည်အမျိုးအမီးလေးဦးအထိခွင့်ပြုသော်လည်းတမန်တော်မြတ်သည်အဘယ့်ကြောင့် ဇနီးမယား(၁၁)ယောက်ထိယူခဲ့သနည်း။ ၂)အစ္စလာမ်တွင်၉နှစ်အရွယ်မိန်းခလေးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးဟုသတ်မှတ်ထားပါသလား၊ မိမိကိုယ်တိုင်ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသလား။ ၃)တမန်တော်မြတ်တွင်သားတော်များရှိခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင်မည်သည့်ဇနီးနှင့်ပေါင်းဖတ်၍ရခဲ့ပါသနည်း ဆယ့်တစ်ယောက်သောဇနီးများတွင်ခဒီဂျာသခင်မကြီးနှင့်သာသမီးမိန်းခလေးများထွန်းကားပြီ ကျန်ဇနီးများမှာသား၊သမီးမထွန်းကားခဲ့သည်ဟုကြားဖူးပါသည်။ဟုတ်ပါသလား၊ ၄)အစ္စလာမ်တွင်ကျွန်ကိုဇနီးအဖြစ်မသက်မှတ်ဘဲပေါင်းသင်းနိုင်ပါသလား၊ကျွန်ဆိုလျှင်အကန့်အသက်မရှိ ပေါင်းသင်းခွင့်ရှိပါသလား။ ၅)ဘာသာခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုတွင်ကိုယ်တော်မြတ်တွင်ဇနီးမယား(၆၁)ယောက်ယူထားသည်ဟုအမည်နာမ များနှင့်ပါဖော်ပြထားပါသည်။ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကျွန်မများနှင့်ပါပေါင်းသင်းခဲ့ပါသလား။ ဤမေးခွန်းများမှာဘာသာခြားများကကက်သီးကပ်သက်မေးသောမေးခွန်းများဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိလိုစိတ်ပြင်းပြမိပါသည်။ဖြေပေးမည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းမွန်ပေလိမ့်မည်။
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 12, 2009 at 3:34pm
အဲဒီမေးခွန်းများကို ဖြေဖို့ ဒီဖိုရမ်လေးကို လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ နမာဇ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းများကို ဖြေရန်အတွက်သာ l.zayar said:
Permalink Reply by elan.electric on December 12, 2009 at 5:47pm
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 13, 2009 at 3:49pm
i have invited.
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 15, 2009 at 1:03am
Internet Email, Gmail များတွင် တွေ့သိနေရသော အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ ယိုးစွပ်တင်ပြချက်များ ကြောင့် မွတ်စလင်မ်လူငယ်များမှားယွင်းစွာ သုံးသပ်၊ ဆုံးဖြတ်၊ မပြုလုပ်မိစေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ ယင်းစွပ်စွဲစော်ကားမှုများသည် (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ်၊ (၂)တမန်တော်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)အပေါ် (၃) အစ္စလာမ်နှင့် (၄) မွတ်စလင်မ်ထုအပေါ်တွင်ပြုလုပ်ထားကြခြင်းဖြစ်ရာ အလ္လာဟ်အရှင်ကိုဆဲဆိုထားသောစာသားများပါရှိနေသဖြင့် ထာဝရ ဘုရားကို ယုံကြည်မှုရှိသောခရစ်ယာန်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံကြည်သော ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များရေးသားချက်မဟုတ်နိုင်ကြောင်း သာမန်ကောက်ချက်ချမိနိုင်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရသော် ဖန်ဆင်းရှင်ကို လက်မခံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်းမည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လွယ်ကူစွာပင် သိနိုင်ပါသည်။အကြောင်းမှာ -ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် ငါးပါးသီလကို အထူးစောင့်ထိန်းရပါသည်။ငါးပါးသီလထဲတွင် မုသားပြောခြင်းကို ရှောင်ကြည်ရခြင်း သည်လည်းတစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်ရာ "တမန်တော်မြတ်၌ ဇနီး အယောက် (၆၁)ယောက်ရှိသည်ဟုနာမည်များဖြင့် လုပ်ကြံရေး သားမှုများပါဝင်နေသဖြင့် " ငါးပါးသီလကိုကျိုးပေါက်ရာရောက်စေသဖြင့် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတစ်ဦးမှာ ထိုအမှုကိုကျူးလွန်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျန်စွပ်စွဲတင်ပြချက်များသည်လည်းမုသားဆင်ထားမှုများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်၌ကလည်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး၊တစ်ပါးသူကိုလည်း လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင် ပြုပြင်ပေးတတ်သော စိတ်ထားကိုထားတတ်ကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ "သူတစ်ပါးကိုဆုံးမသောနည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြုကျင့်ရာ၏။မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးပြီးသော်မှ သူတစ်ပါးကို ဆုံးမရာ၏။ မိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရခြင်းသည် ခဲယဉ်းလှစွာတကား" (ဓမ္မပဒ-၁၅၉) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွင် လူကြီးသူမတို့သည် မိမိတို့၏သားမြေးတို့အားဆုံးမသွန်သင်လေ့ရှိသော စကားတစ်ခွန်း မှာ - "အမိယုတ်က နှုတ်ကြမ်း၍ အဖယုတ်က အမူအယာကြမ်း၏" ဟူ၍ ဖြစ်ရာ မိယုတ်၊ဖယုတ် တို့မှာ နှုတ်၊ အမူအယာကြမ်း သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ကာမိမိမိုက်မဲမှုကြောင့် မိဘများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးရာ ရောက်စေသဖြင့်ဤအပြုအမူမျိုးကို ရှောင်ရှားတတ်သည်ဖြစ်ရကား ယခုကဲ့သို့ယုတ်ညံ့သောစကားများကို ဆိုဝံ့သူတို့မှာ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ဦးလည်းမဖြစ်တန်ရာပေ။ ယင်းတို့၏ ရေးသားချက်များတွင် ဘာသာရေးရန်တိုက်ပေးခြင်း၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးစိတ်များဖြစ်စေရန် သွေးထိုးပေးခြင်း ဖြင့် ရှုတ်ထွေးမှုများ၊မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်လာအောင် တိုက်ထွန်းထားပေရာ ဤသည်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လုံးဝညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရပြန်ပါသည်။ "သူတော်ကောင်းသည် သူနှစ်ယောက်တို့၏ညီညွတ်မှုကို ဖျက်စီးတတ်သောကုန်းတိုက် စကားပြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်၏။ စိတ်ဝမ်းကွဲသောသူတို့ကိုစေ့စပ်၏။ ညီညွတ်ပြီးသောသူတို့ကို အမြဲညီညွတ်အောင် ကူညီ၏။ ပြောဆို၏။"(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ဆဗ္ဗိသောဓနသုတ်)။ သို့ရှိရာ မွတ်စလင်မ်လူငယ်တို့သည် Internet Email, Gmailများတွင်တွေ့နေရသော အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မွတ်စလင်မ်မုန်းတီး ရေး၊၀ါဒဖြန့်စာသားများကို ရေးသားတင်ပြနေသူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေးမထင်ကောင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် ထိုသို့သော အောက်တန်းကျသည့်အမှုအား ဘယ်နည်းဖြင့်မျှ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ အသိမရှိဘဲနှင့်အထင်မှားမိပါက မိမိ၌ပင် အပြစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ "အို-ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည်များစွာသောထင်မြင်ယူဆချက်များမှရှောင် ကြဉ်ကြလေကုန်။ ဧကန်အမှန် အချို့သောထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ အပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။" (ကုရ်အာန် ၄၉း၁၂) (၁) အစ္စလာမ်တွင် စစ်ပွဲများကို ခွင့်ပြုထားရခြင်း မက္ကာဟ်သားမုရှရီက်တို့၏ စော်ကားမှု၊ အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုများကိုတမန်တော်မုဟမ္မဒ် (ဆွ)ကို လက်ခံခဲ့ကြသော သူတို့မှာ ဒလစပ်ခံခဲ့ကြရပြီး၊အလ္လာဟ်ဘက်မှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်၍ အခွင့်အရေးမပေးသေးသဖြင့် နင်းပြားဘ၀သို့ရောက်ခဲ့ရပုံမှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်တို့အတွက် ကရုဏာသက်ဖွယ်တစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ရပါသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစ္စလာမ်သည်မွန်မြတ်မှန်ကန်သော လမ်းစဉ်အယူဝါဒဖြစ်ကြောင်းကို လက်တွေ့ပြသရန်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်ရကား အစတွင် မေတ္တာတရားကို ကိုယ်ထင်ပြဖို့ငုံ့ခံခိုင်းခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်မှ သစ္စာတရားကို ခိုဝင်ကြဖို့တုံ့ပြန်ခိုင်းပါသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာတွင် စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် ခွင့်ပြုထားသော်လည်း သဘာဝကျသောသာသနာ၊ လက်တွေ့ဆန်သော သာသနာ၊ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော သာသနာ၊ တရားမျှတကိုမျက်ခြေအပြတ်မခံသောသာသနာ၊ မေတ္တာတရားကို အပျိုရည်မပျက်စေသော သာသနာ၊အမှန်တရားနှင့်ယှဉ်သော သာသနာ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ စည်းကမ်းချက်များကိုတင်းကြပ်စွာချမှတ်ထားပါသည်။ "လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား ပြန်တိုက်ကြလေကုန်။" (ကုရ်အာန် ၂း၁၉၁) အစ္စလာမ်တွင် ခုခံစစ် သက်သက်ကိုသာ ခွင့်ပြုထားပြီး ၊ကျူးကျော်စစ်ဟူသမျှကို အားမပေးပါ။ မထောက်ခံပါ။ မပြုခိုင်းပါ။ ဤသို့ တရားသော ခုခံစစ်၊ ပြန်တိုက်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့သည့် အချိန်မှာဟစ်ဂျရီ (၂)ခုနှစ်၊ ဆွဖရ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ရာ တမန်တော်သက်တော်(၅၅)နှစ်ရောက်မှသာ ဖြစ်ပါသည် တနည်းဆိုသော် မွတ်စလင်မ်တို့သည် ၁၅နှစ်လုံးလုံး အနိုင်ကျင့်ခံ ဘ၀ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ "အလ္လာဟ့်လမ်း၌ အသင်တို့ကို တိုက်ခိုက်လာသူတို့အား တိုက်ခိုက်ကြကုန်လော့။သို့ရာတွင် အသင် တို့သည် စည်းဖောက်သူများ မဖြစ်ကြကုန်လင့်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် စည်းကမ်း၊ ဖောက်ဖျက်သူတို့အား နှစ်သက်တော်မမူပေ။လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား တွေ့ရှိရာအရပ်၌ သုတ်သင်ကြလေကုန်။ အသင်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ကြသော နေရာမှ အသင်တို့ကလည်း ပြန်လည် နှင်ထုတ်ကြလေကုန်။ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းထက်ပင် ပို၍ဆိုးရွားလှ ပေသည်"ကုရ်အာန် (၂း၁၉၀-၁၉၁) - အလွန်ရိုးစင်းလှသော စည်းကမ်းလမ်းညွှန်ပင် - (က) အလ္လာဟ့်လမ်း၌ လာရောက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား ပြန်တိုက်ရန် (ခ) စည်းမကျူးကြရန် (ဂ) ကျူးကျော်သူကို တွေ့ရာအရပ်၌ နှိမ်နှင်းရန် (ဃ) မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သောနေရာမှာ ပြန်လည်နှင်ထုတ်ရန်ဟုသာဆက်တိုက်ပြောထားရာ (၁) မိမိအိမ်၌ မိမိနေသော (၂) မိမိအလုပ်မိမိလုပ်နေသော (၃)မိမိနေရာ၌ မိမိရှိနေသော (၄) မွတ်စလင်မ်တို့အား မကျူးကျော်သော ၊မစော်ကားသော သူတို့အား ဘာတစ်ခုမျှ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထားချက် မရှိပါ။ မပါပါ။ အစ္စလာမ်တွင် ခုခံစစ်ကို ခွင့်ပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ "ညှင်းပမ်းမှုလုံးဝ ပပျောက်သွားသည့်အထိ၊ သာသနာသည် အလ္လာဟ့်အတွက်ဖြစ်သည့်တိုင် ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ကြလေကုန်။ သို့ရာတွင် ထိုသူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းကို ရပ်စဲကြပါလျှင် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သူတို့မှတစ်ပါးအခြားသူများကို ရန်လိုစရာ အကြောင်းမရှိပေ။" (ကုရ်အာန် ၂း၁၉၃) "သာသနာရေး၌ အဓမ္မ စနစ် မရှိစေရ။" (ကုရ်အာန် ၂း၂၅၆) သို့ရှိပေရာ အစ္စလာမ်တွင် စစ်တိုက်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုရာ၌ - (က) တရားသောခုခံစစ်သာ ဖြစ်ရပေမည်။ (ခ) ကျူးကျော်စစ် လုံးဝမဖြစ်စေရ။ (ဂ) စည်းကမ်းမဖောက်ရ။ (ဃ) ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု မရှိစေရ (င) စစ်ပြေငြိမ်းပါက ရန်မလိုရ ဟူသောအချက်များနှင့်အညီသာပြုခွင့်ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။အစ္စလာမ်သည် ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ " အို လူသားအပေါင်းတို့၊ ငါအရှင်သည် အသင်တို့အား တစ်မိတစ်ဖတည်းမှဖန်ဆင်း ပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်။"(ကုရ်အာန် ၄၉း၁၃) ဤအာယသ်တော်သည် လူသားအပေါင်းတို့သည် ကမ္ဘာအိမ်ထောင်စုကြီးဖြစ်သည်ဟုဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်က ဤအတိုင်းပင်ခံယူထားပါသည်။ "အသင်တို့အား ဘာသာရေး၌ မတိုက်ခိုက်သူများ၊ အသင်တို့အား အိမ်များမှမနှင်ထုတ်သူများအား ကောင်းကျိုးပြုပေး ခြင်းနှင့်တရားမျှတစွာဆက်ဆံခြင်းကို ငါအရှင်မြတ်က မတားမြစ်ပါ။" (ကုရ်အာန် ၆၀း၈) "အသင်တို့သည် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာသူများပင်။" (ကုရ်အာန် ၃း၁၁၀) "ထို မယုံကြည်သူတို့အား ခွင့်လွှတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပြောပါ။သူတို့သည် မကြာမီ သိလာကြမှာပါ။" (ကုရ်အာန် ၄၃း၈၉) "မွတ်စလင်မ်ဟူသည် လူသားတို့အားသူ၏ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူ၏လက်ဖြင့်လည်းကောင်း ငြိမ်းချမ်းရာရစေကြောင်း ဖန်တီးပေးသူသာဖြစ်၏ "(တမန်တော်မြတ် ၏နောက်ဆုံး ဟဂ်ျမိန့်ခွန်း) အစ္စလာမ်ကပြဆိုသော အိမ်ထောင်ရေး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော ဘာသာသာသနာအသီးသီးသည် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ရာအပေါင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်။ ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းစည်းကမ်းနည်းလမ်းများ ချမှတ်သွန်သင်ထားပါသည်။အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြား ပြသရာ၌ အစ္စလာမ်သည်အပြည့်စုံဆုံးဟု ဆိုရပေမည်။ မည်သည့်အယူဝါဒကမျှ အမျိုးသားသည် ဇနီးမယားဘယ်နှစ်ဦးယူခွင့်ရှိသည်ကိုတိတိပပ ပြောဆိုထားခြင်းကို မတွေ့ရပေ။ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးထမ်းအရသာအိမ်ထောင်သားမွေးပြုကြပြီး တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို အများအားဖြင့်ကျင့်သုံးနေကြပါသည်။ အစ္စလာမ်သည် သဘာဝကျသော သာသနာဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ အမျိုးသားတစ်ဦးအားဇနီးတစ်ယောက်သာ ယူရမည်ဟု ပြောမထားပါ။ ဤသို့သတ်မှတ်ထားပါက အချို့သောသူများအတွက် ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်သည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ပီပြင်စွာတင်ပြထားသည့်တစ်ခုတည်းသော သာသနာဖြစ်ပါသည်။ အသင်တို့သည် ခိုကိုးရမဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှုအတွက်စိုးရိမ် မကင်းဖြစ်ပါမူ အမျိုးသမီး တစ်ဦး (သို့မဟုတ်)အသင်တို့လက်ယာလက်ကပိုင်ဆိုင်သော ကျွန်မ တစ်ဦးနှင့်ပင် လက်ထပ်ရပေမည်။(ကုရ်အာန် ၄း၃) ဤအာယသ်တော်အား ခွဲခြမ်းစိစစ်သော်-(က) မိဘမဲ့ ကလေးများကို စာနာသနားမှု (ခ) တရားမျှတမှုကိုရှေ့တန်းတင်ခြင်း(ဂ) တစ်ဦးတည်းယူရန် အသားပေးခြင်း (ဃ) ကျေးကျွန်ကို ဂုဏ်ပေးကာသူကောင်းပြုစေမှုတို့ပါဝင်နေသည်မှာ ထင်ရှားနေပါသည်။ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ခေတ်အချိန်၌ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ထွန်းကားနေပြီးကျွန်လူတန်းစားတို့ခမျာမှာလည်း အနှိမ်ခံ၊ အနိုင်ကျင့်ခံ ဘ၀မျိုးဖြင့်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျကာ လူဖြစ်ကျိုးမနပ်ဖြစ်နေကြရရှာပေသည်။ သို့ရှိရာအစ္စလာမ်သည် လူလူချင်း တစ်ဘက်သတ်အနိုင်ကျင့်မှုကို လက်မခံ၊ အားမပေးသောသာသနာဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ကျွန်စနစ်ပပျောက်ရေးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကာ ရှေ့တန်းက ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် အစ္စလာမ့်မဏ္ဍိုင်ကြီး (၅) ရပ်အနက်မှတစ်ရပ်အပါအ၀င်ဖြစ်သော ဇကားသ်(သန့်စင်ဒါန) ငွေကြေးကို ပေးသည့်အခါ၌ "ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်စေရန်" အတွက်ပါပေးကြရန် မိန့်ကြားထားပါသည်။(ကုရ်အာန် ၉း၆၀)။ ထို့ပြင် ဂျန္နသ်သို့ စံမြန်းရမည့်သူတော်ကောင်းတို့၏အရည်အချင်းကိုဖော်ကျူးရာတွင်လည်း - "ကျွန်တစ်ဦးကိုလွတ်မြောက်စေမှု"သည်လည်းတစ်ရပ်အပါအ၀င်ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။}} (ကုရ်အာန် ၉၀း၁၃) အစ္စလာမ်သည် ကျွန်လူတန်းစားကိုသနားကြင်နာခိုင်းပါသည်။ကယ်တင်ခိုင်းပါသည်။ ကောင်းမွန်ရာကိုပြုစေပါသည်။ "ကြင်ဖော်မရှိသော ယောက်ျား-မိန်းမတို့အားလည်းကောင်း၊ ကောင်းသောကျွန်-ကျွန်မများကိုလည်းကောင်း ထိမ်းမြားပေး ကြပါလေ။" (ကုရ်အာန် ၂၄း၃၂) အစ္စလာမ်သည် ဘာသာခြားအမျိုးသမီးများကိုယူ၍ သာသနာမပြုခိုင်းပါ။"ယုံကြည်သူ မုရ်ှရီက်ထက်စာလျှင် ယုံကြည်သူ ကျွန်မကပို၍ကောင်းမြတ်လှပေသည်။" (ကုရ်အာန် ၂း၂၂၁) ဟစ်ဂျရီ ၂ ခုနှစ် ၊ ဆွဖရ်လ (၁၂)ရက်နေ့၌ စော်ကားကျူးကျော်သူတို့အားပြန်လည်ခုခံပိုင်ခွင့် ရရှိသွားသဖြင့် အများ ငြိမ်းချမ်းအတွက်မဖြစ်မနေစစ်ပွဲများကို မလွှဲမရှောင်သာဆင်နွှဲခဲ့ကြရလေရာ ခုခံစစ်ပွဲများ၌ကျဆုံးသွားသော ရှဟီဒီ အာဇာနည်များ၏ ဇနီးမယားများမှာ မုဆိုးမဘ၀သို့ဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီးတိုင်း မုဆိုးမအရေအတွက်တိုးလာရာ သူမတို့၏ဘ၀ လုံခြုံရေးအတွက်နှင့် အဖမဲ့ကလေးများ၏ရပ်တည်ရှင်သန်ရေးတို့အတွက် အကာအကွယ် ပေးရန်နှင့် နွေးထွေးသောမေတ္တာပေးရန်လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွ)က မိမိ၏နောက်လိုက် ဆွဟာဗဟ်တို့ကို မုဆိုးမများကို တရားဝင်ထိမ်းမြားယူကြပါရန်မိန့်ကြားရာတွင် ဆွဟာဗဟ်များကလည်း မန်တော်၏အဆိုအမိန့် ကို နာခံကြပါသည်။ဤနေရာ၌ သိထားအပ်သည်မှာ - မဒီနာရှိ အန်ဆွာရီ ဆွဟာဗဟ်တို့သည် မိမိတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများအားမရှိရှာသော ဆွဟာဗဟ်များကို မိမိတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအနက်မှ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပင် ပေးဝံ့သူများ၊ ပေးခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသကဲ့သို့။ မက္ကာမှ မုဟာဂျီရီးန်ဆွဟာဗဟ်တို့သည်လည်း မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများ၊ အိုးအိမ်များအားလုံးကိုပင် စွန့်ဝံ့သူ များဖြစ်ကြရာသူတို့၏ နှလုံးသားစိတ်အစဉ်တွင် စွန့်လွတ်အနစ်နာခံလိုစိတ်များဖြင့်သာထုံမွန်းနေသူများဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရ ပါမည်။ အမျိုးသမီးများကိုတစ်ဦးထက်မက လက်ထက်ခဲ့ကြခြင်းမှာ အကာအကွယ်ပေးလိုမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ကာမဂုဏ် လိုက်စားဖို့အတွက် တဏှာကျူးလွန်ရန် စိတ်ကူးမရှိပါ။ ဤသည်ကိုအလ္လာဟ်ကလည်း ပြင်းထန်စွာ သတိပေးထားပါသည်။ "မိမိတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများဖြင့်ကာမဂုဏ်လိုက်စားသူများအဖြစ်နှင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သူများအဖြစ်နှင့်သာ ထိမ်းမြားကြလေကုန်။" (ကုရ်အာန် ၄း၂၄) အစ္စလာမ်သာသနာ၏ သင်ကြားချက်၌ မိမိမလုပ်သောအလုပ်ကို သူတစ်ပါးအားလုပ်ခိုင်းခြင်းကို အလွန်စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ အဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။ "အသင်တို့ မပြုလုပ်သောကိစ္စကို အဘယ်အတွက်ကြောင့် ပြောဆိုနေကြပါသနည်း။အလ္လာဟ့်ထံတွင် အသင်တို့ မပြုလုပ်သော ကိစ္စကို ပြောဆိုခြင်းသည်အလွန်ပင်ရွံ့စရာကောင်းလှ ပေသည်။"(ကုရ်အာန်၆၁း၂-၃) ထို့ကြောင့် တမန်တော်မြတ် (ဆွ)သည် ဆွဟာဗဟ်များကို မုဆိုးမများကိုစောင့်ရှောက်ရန် သင်ကြားရာ၌ မိမိကိုယ်တိုင် လည်းလက်တွေ့စံပြပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း တမန်တော်မြတ်၏ဇနီး(၁၁)ပါးတွင် အာအိရှာသခင်မသာလျှင် အပျိုဖြစ်ကာ ကျန် (၁၀)ယောက်မှာမုဆိုးမများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ အာအိရှာသခင်မနှင့် ပတ်သက်၍ ယိုးစွတ်ချက်တစ်ခုမှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် သခင်မအား အရွယ်မရောက်သေးခင် ထိမ်းမြားခဲ့သည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ယုတ္တိကင်းသော စွပ်စွဲချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်၏ သင်ကြားချက်၌(က) အရွယ်မရောက်သေးသောသူကို ထိမ်းမြားလက်ထက်ခွင့်မရှိပါ။ (ကုရ်အာန် ၄း၆)(ခ) အမွေတစ်ရပ်အနေဖြင့်လည်း အဓမ္မသိမ်းပိုက်ခွင့်မရှိပါ။ (ကုရ်အာန် ၄း၁၉) အစ္စလာမ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်မှုများရှိစဉ်အခါသမယ၌တမန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကုရ်အာန်နှင့် ဆန့်ကျင်သော အမှုများကို ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုပါလျှင် -(၁) အစ္စလာမ်ကို မလိုလားသည့်မက္ကာသား မုရှရီက်တို့၏ တွံတွေးခွက်၌ပက်လက်မျောရမည့်အဖြစ်ပင်။(၂) နောက်လိုက်တို့၏ စိတ်ကူးတွင်လည်း သူကိုယ်၌က မလိုက်နာသောမလုပ်နိုင်သော ကိစ္စအား မိမိတို့ကို ခိုင်းစေသဖြင့် အလ္လာဟ်ရွံသောသူအဖြစ်ရှုမြင်သွားကာ အားလုံးက တမန်တော်အပါးမှ ဆုတ်ခွာသွားကြမည်မှာ ဧကန်ပင်။(၃) တမန်တော်နှင့် ဆွဟာဗဟ်များအကြား၌ အတူရောနှောနေကြသော "မုနာဖိက်"အယောင်ဆောင်မွတ်စလင်မ်များအဖို့မူ တမန်တော်နှင့် ဆွဟာဗဟ်များအကြား၌ဤကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ သွေးခွဲရန်လည်း မဟာအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပင် မဟုတ်ပါလား။သို့သော် - (က) မက္ကာသား မုရှရီက်တို့၏ လက်ညှိုးထိုးကဲ့ရဲ့ခြင်းကို တမန်တော်မြတ်မခံခဲ့ရခြင်း(ခ) ဆွဟာဗဟ်တို့၏ အကြည်ညိုပျက်ခြင်းကိုလည်း မခံခဲ့ရခြင်း(အာအိရှာသခင်မ၏ ဖခင်ကြီးအပါအ၀င်)(ဂ) မုနာဖိက်တို့အတွက် သွေးခွဲစရာ၊ ၀ါဒဖြန့်စရာဖြစ်ရအောင် ဟာကွက်၊ပျော့ကွက် မရှိခဲ့ခြင်းမှာ တမန်တော်သည် မိမိပြောသော စကားကိုမိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာခဲ့သောကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်။ တမန်တော်မြတ်အား လူပျိုလူလွတ်ဘ၀၌ပင် မက္ကာခေါင်းဆောင်များသည်အစ္စလာမ်ကို ဆက်လက်မဟောကြားက အိုးအိမ်၊ ရတနာပစ္စည်း၊ မက္ကာမြို့ရဲ့အာဏာနှင့်နှစ်သက်ရာအမျိုးသမီးများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာရာတွင်တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန်ခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်သည် အာဏာလည်းမမက်ပါ၊ စည်းစိမ်လည်း မမက်မောပါ။ မိန်းမလည်း မက်မောခြင်းကင်းကြောင်းလက်တွေ့သက်သေထူခဲ့ပြီးပါပြီ။ သက်တော် (၂၅)နှစ်၌ မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်သူ ခတီဂျာသခင်မနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို တာဝန်သိသိ၊သိက္ခာရှိရှိထူထောင်သွားခဲ့သည်မှာ ခတီဂျာသခင်မ ကွယ်လွန်ချိန် တမန်တော်မြတ်သက်တော် (၄၈)နှစ်အထိပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခတီဂျာသခင်မနှင့် (၂၃)နှစ်တာတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သော တမန်တော်မြတ်အား လူပျိုဘ၀၌ရော၊အိမ်ထောင်သည်ဘ၀၌ပါ မိမိအား စွဲလန်းချစ်ခင်နှစ်သက်သော အမျိုးသမီးများစွာရှိခဲ့ရာ စိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘဲ အားနည်းသူ ကျွန်များ၊အမျိုးသမီးများဘက်မှ လူနည်းစုဘက်မှ ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးရင်း၊ လူမှု့ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အစ္စလာမ့်တရားကို ဖြန့်ချီရင်းဖြင့်သာ မိမိဘ၀ကိုတန်ဘိုးရှိရှိ၊ သိက္ခာသမာဓိအပြည့်ဖြင့် နေထိုင်သွားခဲ့သဖြင့် ဘာသာမတူသူကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင် တို့၏ လေးစားမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယပြည်၏စံပြခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သော မဟတ္တမဂန္ဓီကြီး၏ စကားကိုကိုးကားဖော်ပြရပါသော်- "ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးစင်းသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ရိုးစင်းသောဘ၀ကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့မှာ တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်ကို အားကျ၍ ဖြစ်ပါသည်။" "အကြင်သူတစ်ဦးသည် အစ္စလာမ်ကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာမည်ဆိုပါကအစ္စလာမ်ဘာသာကို ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် ချစ်ခင်လေးစားလိုစိတ်များတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။ အစ္စလာမ်သည် အကြမ်းဖက်မှုကို အားမပေး၊ အလ္လာဟ်သည် စစ်ကို မလိုလား "၄င်းတို့သည် စစ်မီးကို မွှေးသော အခါတိုင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ထိုစစ်မီးကို ငြိမ်းစေ တော်မူခဲ့သည်။ ၄င်းပြင် ထိုသူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ်ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြကုန်၏"(ကုရ်အာန် ၅း၆၄) "ထို့ပြင် ၄င်းတို့သည် သင်တို့ထံ စစ်မက်ကျေအေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါမူ၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား စစ်တိုက်ကြရန်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမျှ ခွင့်ပြုတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။" (ကုရ်အာန် ၄း၉၀) မျိုးပြုန်းသတ်ရန်ဝေးစွ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပင် မတရားသတ်ဖြတ်ခွင့် မရှိ "မည်သူမဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်အား အသက်တစ်ချောင်း၏အစားလည်းမဟုတ်၊တိုင်းပြည်၌ သောင်းကျန်းဖျက်စီးမှု ကြောင့်လည်းမဟုတ်၊သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါမူထိုသူသည် လူသားအားလုံးကို သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ပင်။"(ကုရ်အာန်၅း၃) တမန်တော်မြတ်သည် မက္ကာကို ပြန်လည်အောင်နိုင်သောအချိန်၌ ဖျက်စီးခဲ့သောနတ်ရုပ်ထုများမှာ တမန်တော် အာဒမ်(အ-စ) အုတ်မြတ်ချ၍ တမန်တော် အိဗ်ရာဟီမ်(အ-စ)မြှင့်တင်ခဲ့သော အလ္လာဟ့်အိမ်တော်မှ နတ်ရုပ်များသာဖြစ်ပြီး၊မက္ကာခေါင်းဆောင် အဗူစူဖီယာန်အိမ်မှ ရုပ်ထုများကို မဖျက်စီးခဲ့သလို၊အခြားမည်သည့်အိမ်၊ မည်သည့်ဆိုင်၊ မည်သည့်နေရာမှ မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်ထားရှိသော ကိုးကွယ်ရာ ရုပ်ထုတစ်ခုတစ်လေကိုမျှပင်ဖျက်စီးတော်မမူခဲ့ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့ပါသည်။ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်သည် တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အိမ်တော်ဖြစ်သည့်အတွက် ရုပ်ထုထားရှိခွင့်မပြုသဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်သည် အခြားဘာသာတရားကို ဖျက်စီးရန်ဝေးစွ၊ မကောင်းပြောခြင်းကိုပင် တားမြစ်၏ "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပြင် ယင်းသူတို့တသကိုးကွယ်နေကြသောကိုးကွယ်ရာများကို မကောင်းပြောဆို ကဲ့ရဲ့ခြင်းမပြုကြနှင့်။" (ကုရ်အာန်၆း၁၀၈) အခြားဘာသာဝင်တို့၏ အဆောက်အဦးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခိုင်းထားသည် "အကယ်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူသားတို့၌ တစ်ချို့ကိုတစ်ချို့ဖြင့်ကာကွယ် တော်မူခြင်းမရှိပါက ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊၀တ်ကျောင်းတော်များ၊ မေတ္တာပွားများရာ တရား စခန်းရိပ်သာများ၊အလ္လာဟ်နာမတော်ကို တသပွားများရာ မတ်စ် ဂျီဒ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် များသည်ဧကန်အမှန် ဖြိုဖျက်ခြင်းခံကြရပေမည်။" (ကုရ်အာန် ၂၂း၄၀) ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအမွေအနှစ်များအား ယနေ့ထက်တိုင် ပါကစ္စတန် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ စောင့်ရှောက်ထားကြပါသည်။ မွတ်စလင်မ်အများဆုံးနေရာ အင်ဒိုနီးရှား၌လည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးကြီးဖြစ်သော "ဗောရော- ဗုဒ္ဓေါ" စေတီတော်ကြီးကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားယဥ
Reply by ပေါက်စ on December 22, 2009 at 11:53pm
တိရ်မီဇီကျမ်းကို ဥပမာ ပေးပါ့မယ် အဗ်ဒုလာ ဗင်အုမရ်၏ အဆိုအရ ရစူလ်က စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘက်သို့ လှည့်ကာ စာအုပ်များက ဘာဆိုသည်ကို အသင်တို့ သိကြပါ၏လော ဟုမေးရာ မသိကြောင်းဖြေကြားခဲ့သည်... သူ၏ ညာဘက်လက်ကို ညွန်ပြရင်း Allah ထံမှ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ထဲတွင် ဂျန်နသ် ရောက်မည့်သူများ ၏ အမည်စာရင်းများ ပါသည်။ ယင်းတို့တွင် ထပ်ဖြည့်၍ မရ။ ထုတ်၍ လည်းမရချေ.... ယုံလား????????????? အဲဒီ ဟဒီးစ်ကို.... ယိုပေါက် ဆိုတာ ဒါမျိုးက ဆိုလိုတာပါ... ဒါမျိုး ဟဒိစ်ကို သူများက ကိုင်ပြီး စော်တာမျိုးကို ပြောတာ ပေါက်စက ဒါနဲ့ကြုံလို့... ယှဗေဗရာသ် (ခေါ်) ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ်ည တစ်ခုကို မွတ်စလင်တွေလုပ်နေတာ ဘာအထောက်အထားနဲ့လဲ... ဇိုရို အက်စ်တရာနီးယန်းတွေမှာ ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်... နောင်ရိုဇ်ည မှာ လာမည့်တစ်နှစ်စာအတွက် လူတဦးချင်းအတွက် ကံအဆိုးအကောင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပြုတယ်...ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်...ဒါနဲ့များပတ်သက်လား... ပေါက်စ ဒီနေ့ အဲဒီ စာအုပ် ထဲက အချက်အလက်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 23, 2009 at 9:36pm
ဒီက ပေါက်စ ပေးတဲ့ ဟဒီးစ်အထောက်အထားလေးတွေကို သေချာ တတ်သိတဲ့ လူတွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ လုံးဝ မမှန်ဘူးလို့ သိရတဲ့အတွက် တင်သီရိအနေနဲ့ ဟဒီးစ်တွေကို လေ့လာချင်ရင်တတ်သိတဲ့ အာလင်မ်တွေက တစ်ဆင့်လေ့လာပါလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီကုရ်အာန် အထောက်အထားလေးတွေက ရစူလ် နဲ့ ကုရ်အာန် ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာကိုပြနေပါတယ် “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်တော်ကို နာခံ၊ အဲဒီနောက် ရစူလ်ရဲ့ အမိန့်ကိုလဲ နာခံ (ကုရ်အာန် 4:59) အကြင်မည်သူမဆို ရစူလ်၏ အမိန့်ကို နာခံသည်ရှိသော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်ကို နာခံရာမည်၏ ကုရ်အာန် 4:80 နောက်ပီး တင်သီရိ ပြောတဲ့ ကျမ်းထဲမှာပဲ ဒီဟဒီးစ်လေးပါပါတယ်ဗျား။ ရစူလ်က ဟဒီးစ်ကို ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားလေးပေါ့ ကျွနိုပ်၏ဟဒီးစ်များကို ကြားသိရပြီး ကျက်မှတ်၍အခြားသူတို့ထံ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ပို့ချသူတို့(၏ဘ၀)ကို အလ္လဟ်အရှင်မြတ် စိုပြေလန်းဆန်းစေတော်မူပါ ဂျာမေ့အ်သိရ် မီဇီကျမ်း၊ တွဲ - 2၊ စာ - 90 ပေါက်စ said:
အဲဒီ ဟဒီးစ်ကိုမှ မကောင်းမြင်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်မ်ကိုတော့ အရမ်းအံ့သြမိပါတယ်။ (ဟေရှမ်း) Reply ပေးသော စာကို ဖတ်ရတဲ့ အတွက် Thanks ပါ... islam ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ mail ပေါက်စ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်... ပေါက်စ အဲဒီထဲက စာတွေကို အကုန်ကူးပြီး မတင်ချင်တာကို နားလည်ပေးပါ... ပေါက်စက မွလ်လာ မဟုတ်ပါဘူး...ဒါကြောင့် စာအုပ်ရဲ့ ဘယ်စာမျက်နှာမှာ ပါတာလဲ ဆိုတာ မသိတော့ဘူး ပေါက်စ စာအုပ်ပုံထဲ ပြန်မွေရမှာပါ... အချိန်ပေးပါ... ပြန်တင်ပေးပါ့မယ့်... Refrence အတိအကျ မပြောနိုင်တာ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါ.. ဥပမာ... ဟူးရ် ကညာပျို (၇၂) ယောက် က သူရေးသလို မဟုတ်ပေမဲ့ (၇၂) ယောက် ဇာတ်လမ်းက ပေါက်စ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ... ဟေရှမ်းတို့က (၇၂) ဇာတ်လမ်းကို သူတို့ အစ အဆုံး ထွင်ရေးထားတာလို့ ယူဆတာလား.... ကိုယ့်တုတ်နဲ့ ကိုယ် အရိုက်ခံရတယ် လို့ ထင်တာလား.... အရွယ်မရောက်သေးသူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာကိုလည်း ပြောကြတာပါ... ဒီ mail မပြန့်ခင် ကြားဖူးတာပဲ... mail က အခုမှ ပေါ်လာတာပဲ... ဇာတ်လမ်း (၂) ပုဒ်လုံး အင်ဆိုတာ ပေါက်စသိတယ်..ပေါက်စ မယုံပါဘူး... အခု ပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်း (၂) ပုဒ်ကို မွတ်စလင်တွေ မကြားဖူးပါဘူး ဆိုပြီး ဟေရှမ်း ပြောမလား.... ဟေရှမ်းတို့ထက် လေ့လာမှု အားနည်းပါတယ်.. ပေါက်စက... မှားရင် ပြင်ပေးပါ... ကြားဖူးတာကို ရင်ဖွင့်တာပါ... ဟဒီးစ်ရဲ့ ခိုင်လုံမှုကို ပေါက်စ မယုံတာပါ... တမန်တော်ရဲ့ ရွှေနှုတ်တော်ကထွက်တယ်လို့ ပြောတာပဲ... ဟဒီးစ် အတုတွေက လည်း တမန်တော်ရဲ့ ရွှေနှုတ်တော်က ထွက်တယ် ပြောမှာပဲ.... အတု အစစ်ခွဲနည်းရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ရွှေကို မှတ်ကျောက်တိုက် သလို 100% သေချာပါ့မလား.... ကုရ်အာန် အာယတ် အချို့ (၃၅;၃၁) အသင့်ထံ ငါအရှင်က ချပေးရာ ကျမ်းဂန်သည်ကား သစ္စာတရားတည်း (၂း၂) ကုရ်အာန်ကျမ်းသည် အမှန်ပင် လမ်ညွန်ဖြစ်သည်ကို သံသယ ဖြစ်စရာ မလို (၁၇း၁၉) ထို့နောက် ယင်းကို ရှင်းပြခြင်းမှာ ငါအရှင်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်. (၁၁း၁) ကုရ်အာန်က ဘ၀လမ်းစဉ်တည်း။ ယင်း၏ ဥပဒေများသည်ကား ထာဝရ တန်ဖိုးပေါ် အခြေပြုထားသည်.. ဂုဏ်အင်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံရာ အလုံးစုံကို သိစွမ်းတော်မူရာ အရှင်က အသေးစိတ်ကို အကျယ်အကျယ် ရှင်းလင်းထားရာတည်း။ ဘူခါရီ ကို လက်ခံမှသာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အကျယ်ဖြန့်ပြီး နားလည်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ၁၇း၁၉ နှင့် ၁၁း၁ တွင် မိန့်ထားသော Allah ကတိကို မယုံကြည်ရာ များ ရောက်နေမလား.... ဘူခါရီ ဟဒီးစ် (အတွဲ ၃။ ကိတဗ် ဖဇလုလ် ကုရ်အာန်) ရစူလ်သည် အဘယ် အရာကို ထားခဲ့ပါသနည်း၊ ကုရ်အာန်မှ အပ ဘာကို မျှ မထားခဲ့ပါ ကုရ်အာန်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဘ၀တည်ဆောက်နိုင်မှုကို Allah အရှင် ချီးမြင့်တော်မူပါစေ...
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 23, 2009 at 9:39pm
ဒီမှာပြတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုင်တဲ့ ဟဒီးစ်က လဲ မရှိပါဘူးတဲ့ ကျနော်မေးပြီးပါပြီ။ စာအုပ်အမှန်အကန်တွေမှာ သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ယှာဗေဗရာအသ်ည နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာကို သေချာပြန်ရှင်းပြပါ ဒါမှ ကျနော်တို့ဖြေပေးလို့ရမှာလေ ဟုတ်ပီလား ပေါက်စ said:
Permalink Reply by ပေါက်စ on December 24, 2009 at 12:33am
ဒီက ပေါက်စ ပေးတဲ့ ဟဒီးစ်အထောက်အထားလေးတွေကို သေချာ တတ်သိတဲ့ လူတွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ လုံးဝ မမှန်ဘူးလို့ သိရတဲ့အတွက် (ဟေရှမ်း) ငြင်းမယ်လို့ ထင်ပြီးသားပါ... OK Another example ဗူခါရီ ၊ ဗါဗုလ်အစ္စလာမ် အခန်း နှင့် မစ်ရှကားသ်ကျမ်း၊ ဗါဗုလ်အိလ်မ် အခန်း အဘူဟိုရိုင်ရာ က တင်ပြခဲ့သည်မှာ ရစူလ်ထံပါးမှ နှစ်မျိုးသော ပညာရတနာကို ရရှိ ဆည်းပူးခဲ့ရပါသည်။ ထင်ရှားရာ ပညာရတနာကို ငါက ဖြန့်ကျက် အသိပေးခဲ့ပြီ၊ ကျန်တစ်မျိုး (အကွယ်ပညာ) ကိုမူ ဖွင့်ဆို မကောင်းပေ။ ငါ၏ လည်ပင်းသွေးကြောကို ဖြတ်ပစ်စေဦး ငါမပြော ဟူ၏ ဖော်ပြထားသော ဟဒီးစ်ကား စွန်နီတို့ခိုင်လုံသည် ဟု ပြောသော ဘူခါရီတွင် ပါခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရွေးစင် လူတစ်စုအား လျှို့ဝှက် ပညာပေးခဲ့သည်ဟု ယူဆသော ထိုဟဒီးစ် သည် တမန်တော်မြတ်ကို ထိခိုက်သည် ဟု ယူဆစရာ... အောက်ပါ အာယတ်များနှင့် ဆန့်ကျင်ပြန်သည်.... (၅း၆၇) အိုရစူလ်... အသင်၏ အရှင်ထံမှ အသင့်ထံ ချပေးရာ သတင်းစကားကို လူတိုင်းအကျိုးရရန်အတွက် ကြေညာလော့ (၂း၁၅၉) ရှင်းလင်းထင်ရှားသော သတင်းစကားကို ဖုံးကွယ်သူတို့သည် လည်းကောင်း၊ လူသားထု အပေါ် အတိအလင်း ကျမ်းထက်ဝယ် ရှင်းပြဖို့ ချပေးထားရာ လမ်းညွှန်ကို ဖုံးကွယ်သူတို့ သည် လည်းကောင်း Allah ၏ အမျက်ဆိုက်ခံရအံ့ ဒီတစ်ခေါက် ပေါက်စကူးယူရေးသား ဖော်ပြလိုက်တဲ့ ဟဒီးစ် နဲ့ ကုရ်အာန် အာယသ် တွေကို မေးကြည့်ပါဦး တတ်သိ နားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို... ယှာဗေဗရာအသ်ည နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာကို သေချာပြန်ရှင်းပြပါ ဒါမှ ကျနော်တို့ဖြေပေးလို့ရမှာလေ ဟုတ်ပီလား(ဟေရှမ်း) ယှက် = ည ........ ဘာ language လဲ ယှက်ဗေဗရာသ်ကို မွတ်စလင်တွေ လုပ်နေတာ ဘာအထောက်အထားနဲ့လဲ. ဟဒီးစ် အရလုပ်ရရင် ဘာ ဟဒီးစ်လဲ ဥပမာ အာရဗီ ဘာသာ နဲ့ ဘယ်လိုခေါ်သလဲ.. ဒီစကားလုံးရဲ့ သမိုင်းကို ပေါက်စ နားမလည်လို့ အကျေအလည် ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် Thanks ပါ
Permalink Reply by sithu on December 24, 2009 at 3:21pm
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 24, 2009 at 3:23pm
ပေါက်စ တို့က ဒီလိုအာယသ်လေးတွေ ကိုရော မမြင်ဘူးလား၊ ကုရ်အာန်ကို လေ့လာရင် အာယသ်တိုင်းကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့ ကျနော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အခု ပေါက်စ တို့တင်ပြတဲ့ အာယသ်တွေက ကုရ်အာန် မှာပါပါတယ် ကျနော် မပါဘူး မပြောပါဘူး ။ ကျနော် အကြံပေးချင်တာက ဟဒီးစ်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် လဲ တကယ့်တတ်သိတဲ့ အာလင်မ်တွေထံမှာ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါက နဂလီ မိပြီး မြောင်းထဲကို ရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ နောက်ပြီး ပေါက်စဖတ်ဖို့ ကျနော် စာအုပ်တစ်အုပ် ပြောလိုက်မယ်။ အဲဒီမှာ ဟဒီးစ်ကို ဘယ်လိုလူတွေက စပြီး ငြင်းပယ်ခဲ့သလဲဆိုတာကအစ ပါတယ်။ အဲဒီ တွေကို ဖတ်ပြီး ရင် အခု မွတ်ဆလင်မ်မ်တွေ ဟဒီးစ်ကို လက်မခံ တဲ့ မွတ်ဆလင်မ် တွေရဲ့ စောဒက ဟာ ဘယ်သူတွေရဲ့ နှုတ်တွေကနေ ထွက်ပေါ်လာသလဲ ဆိုတာကို ပါ သိရလိမ့်မယ်။ အဲဒီ စာအုပ်လေးရဲ့ နာမည်က စွန္နသ်တော်နှင့်အင်တာဗျူး ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ အရမ်း အကျိုးရှိလို့ ဖတ်ခိုင်းတာပါ။ ကျနော်အခု အောက်ပါ အာယသ်လေးကို အရင် တင်ပြပါ့မယ်။ အဲဒီမှာ ရစူလ်ရဲ့ ဟဒီးစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဆက်နွယ်နေသလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ငါအရှင်သည် အသင်တို့ထံသို့ ကျမ်းဂန် ကိုချပေးသနားတော်မူခြင်းမှာ သင်သည် လူသားတို့အားသူတို့ထံ ချပေးသနားတော်မူသည့်အမိန့်တော်များကို ရှင်းလင်းပြစေရန်အတွက်ဖြစ်သည် (16:44) အဲဒီအာယသ်မှာ သင်သည် လူသားတို့ထံ ချပေးသနားတော်မူသည့်အမိန့်တော်များကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်ဆိုတာ ဟဒီးစ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီ အာယသ်ရဲ့ အကျယ်ကိုရော ပေါက်စ လေ့လာပြီးပြီလား။ အဲဒီမှာ သင်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ဆိုလိုပြီး ရှင်းလင်းရန်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာ သိလား။ နောက်တစ်ချက် က ဟဒီးစ်တွေကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် ဟဒီးစ် လက်မခံသူတွေရေးထားတဲ့ စာအုပ် တို လေးတွေကို မလေ့လာပါနဲ့လို့ ကျနော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစာအုပ်တွေမှာ သူတို့လိုရာကို ဆွဲသွင်းထားတဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ဟဒီးစ် အတုတွေ ကို ဥပမာပေးထားလို့ပါ။ အဲဒီလို ဟဒီးစ် အတုတွေကို အမှန်လားလို့ တကယ့်တတ်သိတဲ့ ဟဒီးစ် ပညာရှင်တွေကို မေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်၊။ ကုရ်အာန်ရဲ့ အကျယ်ပြန်ကို လဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိ၊ ပေးလိုက်တဲ့ ဟဒီးစ်တွေကလဲ အမှားတွေ တစ်ခုမှ မမှန် မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေက လဲ တစ်ခုမှ အစီအစဉ်ကျတာမပါ။ ယှက်ဗေဗရာသ်ကို မွတ်စလင်တွေ လုပ်နေတာ ဘာအထောက်အထားနဲ့လဲ. ဟဒီးစ် အရလုပ်ရရင် ဘာ ဟဒီးစ်လဲ(ပေါက်စ) ယှဗေဗရာအသ် ကို မွတ်စလ်မ်တွေ လုပ်နေကြတဲ့ အထဲမှာ ဗေဒါအသ်တွေလဲ ပါပါတယ်။ အဲဒါကိုသိချင်ရင်တော့ www.uoifamily.co.cc က ကျနော့်ပေ့က ဘလော့တွေထဲမှာ ကျနော် အဲဒီညည့်မှာလုပ်နေတဲ့ဗေဒါအသ်တွေအကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီညည့်မှာ ရစူလ် ကိုယ်တော် တစ်ယောက်ထဲ ကဗရ်သို့ ဇေရာယသ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆွဟာဗာ များကို တောင် အဖော်မခေါ်သွားခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီညမှာ နောက်နှစ်အတွက် ရိုဇီ ရိက္ခာ၊ မွေးလာမယ့် ကလေး တွေ အစရှိသဖြင့် အဲဒါတွေကို သတ်မှတ်တယ်လို့ ကျနော်တို့သိထားပါတယ်။ အဲဒီညဉ့်မှာ နမာဇ်း ကဇွာ မရှိတဲ့လူကတော့ နဖလ် ဖတ်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကဇွာရှိတဲ့လူတွေက တော့ နဖင်လ် ထက် ကဇွာနမာဇ်းကို ဖတ်သင့်တယ်လို့ စာအုပ်တွေမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီညဉ့်မှာ ဖတ်ရန်အတွက် ဆိုပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စာရွက်တွေ ဟာလဲ အခြေအမြစ်မရှိ တဲ့ စာရွက်တွေလို့ မြစ်ငယ်ကျောင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ စာရွက်မှာဖတ်ဖူးပါ.တယ်။ ပေါက်စ သိချင်တဲ့ အာရဗီလား ဘာသာနဲ့ ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကို ကုရ်အာန်မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါ ။အဲဒီလိုခိုင်းတာကလဲ ပေါက်စတို့က ကုရ်အာန် ဘာသာပြန်တတ်ကျွမ်းတယ်လို့ ကျနော် ယူဆလို့ပါ။ နောက်တစ်ခါ ဟဒီးစ် အထောက်အထားပေးရင် ခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ် ကိုပေးဖို့မမေ့နဲ့နော် မဟုတ်ရင် ရှက်စရာကြီး ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့။ ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့ ကုရ်အာန် အာယသ်ကိုလဲ လေ့လာလိုက်ပါဦး ။
Permalink Reply by ပေါက်စ on December 25, 2009 at 12:20am
ကိုဟေရှမ်းတို့ ပြတဲ့ ဟဒီးစ်မှ ခိုင်တယ်... ဒီဘက်က ပြတဲ့ ဟဒီးစ်တွေကို အားလုံးငြင်းတယ်... ခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ် ဆိုတဲ့ စကား ကိုဟေရှမ်းသုံးတယ်နော်... မခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ်တွေရှိတယ်လို့ မသိစိတ်မှာ လက်ခံတယ် သဘောပေါ့ ကိုဟေရှမ်းတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒီဘက်က ဟဒီးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ထုတ်ထုတ် ငြင်းမှာပဲ... တကယ်က လက်ခံရင် အားလုံး လက်ခံ All or none law ပဲ ကောင်းပါတယ်... ဟို website ကို နောက်အားတဲ့နေ့ကျမှ ၀င်ကြည့်ပါမယ်... အခု လုပ်စရာ ရှိနေလို့.... အာရဗီနဲ့ ဘယ်လိုပြောလဲ မေးတာကို ကုရ်အာန်မှာ ပြန်ရှာခိုင်းတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နဂလီမိမှာ စိုးပြီး သတိပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ကျေးဇူးပြုပြီး အဆင့်တန်းရှိရှိ စကားလုံးများသုံးရန် မွတ်စလင်အချင်းချင်း သတိပေးချင်ပါတယ်... ကိုဟေရှမ်းနဲ့ အယူအဆမတူရင် မြောင်းထဲရောက်မှာလား... ဟဒီးဆိုသည်မှာ သီးသန့်မဟုတ်.. တမန်တော်မြတ် ဖြန့်ချိပို့ချဟောကြားသော (သတင်းစကား) တို့သည် မြတ်ရှင် Allah ၏ ချပေးသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပင် ဖြစ်သည်.... ၁၇း၁၉ ထို့နောက် ယင်းကို ရှင်းပြခြင်းမှာလည်း ဧကန်အမှန် ငါအရှင်မြတ်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်...
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on December 25, 2009 at 8:38pm
ခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ် ဆိုတဲ့ စကား ကိုဟေရှမ်းသုံးတယ်နော်... မခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ်တွေရှိတယ်လို့ မသိစိတ်မှာ လက်ခံတယ် သဘောပေါ့ ကိုဟေရှမ်းတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒီဘက်က ဟဒီးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ထုတ်ထုတ် ငြင်းမှာပဲ... တကယ်က လက်ခံရင် အားလုံး လက်ခံ All or none law ပဲ ကောင်းပါတယ်...(ပေါက်စ) အော် အဲဒီလို မခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ်တွေကို လက်ခံတယ်လို့ကျနော်မပြောမိပါဘူး။ ရှိတာပေါ့ မခိုင်လုံတဲ့ ဟဒီးစ်တွေ အဲဒါတွေက လူတွေလုပ်ကြံထားတဲ့ ဟဒီးစ်တွေပေါ့။ အဲဒါတွေကို သိချင်ရင် အဲဒီဘာသာရပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာမှ ရမယ်။ ကျနော်က အာလင်မ် မဟုတ်တော့ အာလင်မ်တွေ ထံကို မေးမြန်းပြီးမှ ပြောတာပါ အဲဒီ ဟဒီးစ်ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာ။ အကယ်၍ ကျနော်တို့တင်ပေးတဲ့ ဟဒီးစ်ဟာ မှားသွားတယ်ဆိုရင် သေရင် ရှင်းရမှာပေါ့ အဲဒါတော့ကြောက်တယ်။ ပေါက်စ တို့က မကြောက်လို့ အမှားတွေကိုတင်ပေးတာလား။ နဂလီမိမှာ စိုးပြီး သတိပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ကျေးဇူးပြုပြီး အဆင့်တန်းရှိရှိ စကားလုံးများသုံးရန် မွတ်စလင်အချင်းချင်း သတိပေးချင်ပါတယ်... ကိုဟေရှမ်းနဲ့ အယူအဆမတူရင် မြောင်းထဲရောက်မှာလား...(ပေါက်စ) နဂလီ ဆိုတဲ့ စကားက အဆင့်အတန်းမရှိဘူးလို့ဆိုချင်တာလား။ အတု လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အဲဒီ လိုစာအုပ်တွေကို မွတ်ဆလင်မ် တွေဖတ်မိရင် အဆိပ်ပင် ရေလောင်းသလို ဖြစ်မှာမို့လို့ ကျနော်တို့က တင်ပြပေးရတာပါ။ မြောင်းထဲရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်မှီ သောဝ်ဗာ မဖတ်နိုင်ရင်တော့ ငရဲလားမယ့် ကိန်းဆိုက်နေလို့ သတိပေးရတာပါပေါက်စရယ်။ ကျနော် အာယသ်တစ်ခုတင်ပေးခဲ့မယ်နော်။ အဲဒီမှာ သြ၀ါဒ တော်ဆိုတာ ပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာ လေ့လာလိုက်ပါဦး။ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကိုလည်းကောင်း၊ ရစူလ်တမန်တော်၏ သြ၀ါဒတော်များကို လည်းကောင်း လိုက်နာကြကုန်၊ သို့မှသာ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ သနားကြင်နာတော်မူခြင်းကို ခံကြရပေမည်(3:132) ဒါနဲ့တစ်ခုထပ်သတိပေးလိုက်မယ်နော် ကုရ်အာန် ရဲ့ အာယသ်တိုင်းကိုလက်ခံရမယ်နော်။ တစ်အာယသ်ကို မှ ပယ်လို့မရဘူးဆိုတာပါ။
Permalink Reply by Batman on December 28, 2009 at 10:29pm
အခုလို တိတိကျကျ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြတဲ့ ဟာဂျီဟေရှမ်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by ဟေရှမ်း(S-4) on January 20, 2010 at 12:16pm
တိရ်မီဇီကျမ်းကို ဥပမာ ပေးပါ့မယ် အဗ်ဒုလာ ဗင်အုမရ်၏ အဆိုအရ ရစူလ်က စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘက်သို့ လှည့်ကာ စာအုပ်များက ဘာဆိုသည်ကို အသင်တို့ သိကြပါ၏လော ဟုမေးရာ မသိကြောင်းဖြေကြားခဲ့သည်... သူ၏ ညာဘက်လက်ကို ညွန်ပြရင်း Allah ထံမှ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ထဲတွင် ဂျန်နသ် ရောက်မည့်သူများ ၏ အမည်စာရင်းများ ပါသည်။ ယင်းတို့တွင် ထပ်ဖြည့်၍ မရ။ ထုတ်၍ လည်းမရချေ.... (ပေါက်စ) ပေါက်စ ပြောတဲ့ ဟဒီးစ်တော့ မသိဘူး ဒါပေမယ့် အခု ကျနော် တင်ပြပေးမယ့် ဟဒီးစ်တော့ ရှိတယ် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) က နှစ်ခုသော အရာကို ကျနော်တို့ အဖို့ထားတော်မူခဲ့တယ်။ တစ်ခုက အလ္လာဟ့် အရှင် ချပေးတော်မူတဲ့ ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု သော အရာက ရစူလ် ကိုယ်တော်ရဲ့ စွန်နသ် တော်များဖြစ်တယ်။ ဆိုတဲ့ ဟဒီးစ်ပါ
Permalink Reply byံH♥မိုဟာမဒ်နူးရ်ခါးန် on February 15, 2010 at 7:57pm
ဆိုဒ်ထဲကိုဒီနေ့မှမမ်ဘာအဖြစ်စရောက်ခဲ့တာပါ စရောက်ရောက်ခြင်းမှာပဲ (အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းမှု ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရန် ကျင့်စဉ်အသေးစိတ်) ဆိုတဲ့ဖိုရမ်လေးကိုတွေ့တော့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖိုရမ်လေးထဲမှာ reply လုပ်ထားတဲ့ Discussion အများစုက ဒီဖိုရမ်နှင့်မသက်ဆိုင်သလိုပါပဲ။ ဒီဖိုရမ်လေးထဲမှာ reply လုပ်ထားတဲ့ Discussion အများစုကကုရ်အာန်နှင့်ဟဒီးစ်ကို မိမိ၏အလွန်အမင်းအားနည်းမပြည့်စုံလှသော ဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုကာ ဝေဖန်စမ်းစစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အလွန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ဒီဖိုရမ်နှင့်သက်ဆိုင်သောDiscussionများကိုသာဝင်ရောက်peplyလုပ်သင့်ကြောင့်အကြံပေးအပ်ပါသည်။ H♥မိုဟာမဒ်နူးရ်ခါးန်(ပြည်မြန်မာ)
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:22 AM